दसैं, तिहारमा के खाने, के नखाने ? | NepalDut
डा. तारा कोइराला पोखरा
कार्तिक ६ गते २०७७
दसैं, तिहार नेपालीका महान चाड हुन् । यो बेला घरमै खसी काट्ने, धेरै मात्रामा मासु खाने गरिन्छ । पछिल्ला दशकमा हाम्रो खानपानमा धेरै परिवर्तन आएको छ । हाम्रो खानामा मासुको मात्रा बढेको छ । जनावरबाट पाइने बोसो अलि बढी खाइन्छ ।
दसैंमा त घरैमा ल्याएर खसी काट्ने गरिन्छ । घरमै सेल पकाउने गरिन्छ । बिहान बेलुकै मासु खाइन्छ । मासुकै खाजा, मासुकै तरकारी, मासुकै अचार खाइन्छ । एकैचोटि यसरी धेरै मासु खाँदा शरीरमा असर त पार्छ, पार्छ । खानेकुराहरु मिलाएर खान एकदमै जरुरी छ ।
रातो मासुमा २, ३ वटा समस्या छन् । यसमा प्रोटिन एकदमै धेरै हुन्छ । यसमा बोसो पनि बढी हुन्छ । कुखुराको मासु जस्तो, माछाजस्तो कम होइन, कि यसमा प्रोटिन साह्रै नै धेरै हुन्छ । सुगर, मुटु र बोसो बढी भएका, कोलेस्टोल बढी भएकाहरुले खानपानमा खासगरी दसैंतिहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खाँदै नखाने चाहिँ होइन ।
सुगरका बिरामीको कुरा गरौं । उनीहरुमा सुगरको मात्रा बिग्रिने हो । धेरै जसो सुगर भएका बिरामीलाई बोसोको पनि समस्या देखिन्छ । ४० कटेका सुगरका बिरामीले शरीरमा बोसोको मात्रा कमै भए पनि औषधि खानुपर्छ ।
अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने सुगर भएका र नभएका बिरामीको एलडिएल जाँच्दा सुगर भएका बिरामी र नभएकाको सुगर बराबर देखिए पनि सुगर भएका बिरामीको बोसो निकै खतरनाक हुन्छ । जनावरको बोसो बढी साना, बढी गहुँगा, चाडै टासिने हुन्छन् ।
बोसो भएका खानेकुरा एकदमै कम गर्नुपर्छ । माछा, कुखुराको मासु खानु राम्रो हुन्छ । छाला तारेर, बोसो नभएको र फ्राइ नगरी खानु पर्छ । पकाउने तरिका पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । उसिनेर वा झोल बनाएर खानु राम्रो हुन्छ ।
तिहार सुरु भएको छ । तिहारमा खसी, सुंगुरको बोसोमा रोटी पकाएर खाने नगरौं । यो एकदमै खतरनाक हुन्छ । बोसो २ प्रकारको हुन्छ ः स्याचुरेटेड फ्याट, अनस्याचुरेटेड फ्याट । एनिमल बोसो निकै बेफाइदाजनक हुन्छ । यो नसामा टासिने हुन्छ । यसले पछि गएर हृदयघात, पक्षघात जस्ता रोग लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।
खानेकुरा सबै सन्तुलित हुन जरुरी छ । इनर्जी चाहियो भनेर घिउ, माछा, मासु खाएरमात्र शक्ति प्राप्त हुने, स्वस्थ भइने होइन । नेपालीको खानेकुरा कस्तो छ भने अरु बेला भात ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत तरकारी वा अन्य कुरा हुन्छ । दसैंमा भने उल्टो हुन्छ । मासुमात्रै बढी खाइन्छ ।
चाडपर्व, उत्सवमा मासुलाई मात्र विकल्पको रुपमा नहेरी दाल, सागहरु पनि सँगै खानुपर्छ । उनीहरुलाई एनिमल प्रोटिन निकै हानिकारक हुन्छ । रातो मासुले युरिक एसिड पनि बढाउँछ । पेटका समस्या, ग्यास्ट्रिक, अल्सरका बिरामीले यस्ता खाना खानु हुँदैन । सुगररोगका बिरामी यसबाट सचेत हुनुपर्छ । मुटुका रोगी, प्रेसर , पक्षघात भएका बिरामीले बोसो खानु हुँदैन ।
मृगौलाका रोगीहरुले पनि बढी प्रोटिन खानुहुन्न । हामीले खानामा प्रोटिन, कार्बाेहाइटेट, सागसब्जी, गेडागुडी, रेसादार खानेकुरा मिसाएर खानुपर्छ । पीरोले पचाउन सक्नेलाई खासै असर गर्दैन । पेटका बिरामीले भने यसमा विचार गर्नुपर्छ । अमिलो भनेको एसिड हो, पेटमा पहिल्यै एसिड भएका बिरामीले पीरो, अमिलो थप्दा यसले समस्या अझ बढाउछ । मुटु, मृगौलाका बिरामीलाई भने यसले खास असर गर्दैन ।
घिउबाट बनाएका रोटी पनि कम खानु ठीक हुन्छ । मैदाबाट बनेका रोटीले सुगरका बिरामीलाई बेफाइदा गर्छ । रोटी पकाउँदा मकैको तेल, ओलिभ, सूर्यमुखीको तेलमा पकाएको रोटी खानु ठीक हुन्छ । बारम्बार तताएर एउटै तेलमा पकाउनु हुँदैन । अचेल मदिराको चलन बढेको छ । मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि एकदमै हानिकारक छ । तैपनि संस्कृति, रीतिरिवाजको कुरा हुन्छ ।
सुगरका बिरामीले यसरी खानुपरेमा पनि मदिरा एकमदै कम खानुपर्छ । बढीमा एक गिलास बियर जति खान मिल्छ । बढी रक्सी खाँदा सुगरको लेबल एक्कासी घट्ने र बिरामी बेहोस हुने हुन सक्छ । रक्सीसँगै खाने स्न्याक्सले पनि समस्या हुन्छ । कलेजो, कलेजो, मुटु भएका बिरामीले रक्सी खानै हुन्न ।
चिल्लो, पीरो कम खाने गर्नुपर्छ । विभिन्न चाडपर्वमा व्रत बस्ने चलन छ । स्वस्थ मानिसलाई कहिलेकाँही व्रत बस्दा राम्रो हुन्छ । कुनै पनि रोग लागेका बिरामीले व्रत बस्नु हुन्न । पेटका रोग लागेका बिरामीले त झन् भोकै बस्नु हुँदै हुन्न । सुगर भएका बिरामीले त ४, ४ घन्टामा खानुपर्छ । मुटुका बिरामीले व्रत बस्दा मुटुको धड्कन तलमाथि हुन सक्छ ।
मोटोपना नेपालमा बढेको छ । जीवनशैलीको परिवर्तन, आलस्यपन, दिनभर कुर्सीमा बस्ने जस्ता कारणले मोटोपन बढेको हो । पहिला हामी खानेकुरामा फाइबर युक्त खाना, घरमा बनाएका खाना खान्थ्यौं, अहिले खाइने जंक फूडहरुले मोटोपन बढेको हो । धेरै खाना खाएमा शरीरमा यो बोसोको रुपमा डिपोजिट हुन सुरु हुन्छ ।
दसैंमा हामी फलफूल धेरै खान्छौं । यो दसैंतिहारको निकै सकारात्मक पक्ष हो । सबै जसो रोगका बिरामीले फलफूल खान हुन्छ । मृगौलाको मात्रा धेरै नै बिग्रिइसकेका बिरामीले भने फलफूल खाँदा पनि विचार गर्नुपर्छ । पेट, कलेजोका बिरामीले प्रशस्त फलफूल खान मिल्छ । स्वस्थ मानिसले पनि यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मासु खानुका धेरै सकारात्मक पक्ष पनि छन् । हामीलाई एनिमल प्रोटिन चाहिन्छ, भिटामिनहरु चाहिन्छ ।
हामीले खानेकुरामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । बिहान टन्न खाने र बेलुका टन्न खाने बानी परिवर्तन गर्नुपर्छ । भातमात्र धेरै खाने बानी पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । खानामा खनिज, भिटामिन, फूलफूल, सागसब्जी मिलाएर खानुपर्छ । हामी हिड्न छाडिसक्यौं । शारीरिक परिश्रम पनि गर्न छाड्यौं । थाइराइड, मृगौला, मुटु, सुगरका बिरामी बढ्नुको मुख्य कारण हाम्रो जीवनशैली स्वस्थ नहुनु हो ।
हामीलाई धेरै कुरामो चिन्ता छ । कसैले धेरै कमाए पनि चिन्ता, राम्रो गाडी चढे पनि चिन्ता । आफूले कम कमाए पनि चिन्ता, अरुले बढी कमाए पनि चिन्ता । बढी मात्रामा महत्वांक्षी हुने, अनावश्यक चिन्ता लिने गर्नुहुन्न । समयमा सुत्नु जरुरी हुन्छ । समयमा नसुत्दा शरीरलाई आराम पुगेको हुन्न । यसले अनेक समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिनस् । चाडपर्व र हरेक दिनलाई नै उत्सवको रुपमा मनाउनुहोस् । स्वस्थ जीवन र सुखी बन्नोस् । दीपावलीको यहाँहरु सबैमा शुभकामना ।
(मधुमेह, थाइराइड तथा हर्माेन रोग विशेष डा. कोइराला पोखरा सुपर स्पेसालिटी क्लिनिक सभागृहचोकमा कार्यरत छन् )